Semalt - कसरी मालवेयरबाट संक्रमित भइरहेको अनुप्रयोगहरू रोक्न सकिन्छ
इन्टरनेट, स्मार्टफोन, र आईओएस, विन्डोज प्लस एन्ड्रोइड अपरेटि systems प्रणालीको आगमनले लाखौं स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूलाई जाने अनुप्रयोगहरूमा पहुँच गर्न सक्षम गरेको छ। समाचार, खेल, स्ट्रिमिंग भिडियो र चलचित्र, आहार, व्यायाम र तपाईको दिमागमा रहेको जे पनि केहि लागि अनुप्रयोगहरू छन्। दुर्भाग्यवस, सबै कुरा जस्तै, केहि अनुप्रयोगहरू वास्तवमा मालवेयर प्रुद्ध छन्।
गुगल द्वारा प्रयास को बावजुद, गुगल प्ले मा डाउनलोड र स्थापना को लागी उपलब्ध सबै एप्स सफा छैन। माथि उल्लेख गरिएझैं केहिमा मालवेयर लुकेको छ। मालिसियस सफ्टवेयर (जसलाई यहाँ मालवेयर पनि भनिन्छ) टेक्निकल टर्मि डाटाबेस चोरी गर्न प्रयोग गरिएको सफ्टवेयरलाई दिइन्छ, तपाईंको प्रणालीलाई अवरोध पुर्‍याउछ र यस्तै।
एन्ड्रयू Dyhan, को ग्राहक सफलता प्रबन्धक Semalt , संक्रमित अनुप्रयोगहरू डाउनलोड नगर्न बाहिर चित्रा।
गुगलले हालसालै उजुरी गरे कि प्रयोगकर्ताहरूले आफूले डाउनलोड गरेका केही अनुप्रयोगहरूको बारेमा उठाइरहेका थिए। उनीहरूले के भने? ठीक छ, प्रयोगकर्ताहरूले मालवेयर, ड्रेसकोडद्वारा उनीहरूको प्रणालीहरू घुसाएको गुनासो गरे। यो (ड्रेसकोड) खेल र छालाहरूमा इम्बेड गरिएको थियो (हो, ती फाईलहरू जुन उपकरणको प्रयोगकर्ता इन्टरफेसलाई दृश्य अनुप्रयोग ड्रअर, विषयवस्तु र वालपेपरमा परिवर्तन गर्दछ)। खराब मान्छे (साइबर अपराधीहरू) तपाईंको नेटवर्कको वा संगठनको अनलाइन सेवाहरूमा आक्रमण सुरू गर्न ड्रेसकोड प्रयोग गर्थे। चरम अवस्थाहरूमा, तिनीहरूले सर्भरहरू, डाटाबेसहरू र अन्य खराब गतिविधिहरू अक्षम गर्दछन्।
तपाईं आफैंलाई जोगाउन के गर्न सक्नुहुन्छ?
जब तपाइँ सामग्रीको नियन्त्रणमा नहुन सक्दछ जुन आफैलाई Google Play मा फेला पार्दछ, त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जसले आफैलाई ड्रेसकोड र अन्य खराब सफ्टवेयरबाट बचाउन सक्छ जुन खाल वा खेलहरूमा सम्मिलित हुन सक्छ। अवश्य पनि, तपाइँ अनुप्रयोगहरूको लागि भुक्तानी विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो मामला हो भने, तपाईंलाई अवकासपूर्ण सुरक्षाको आश्वासन दिन सकिन्छ।
यदि हातमा तपाइँ प्लेस्टोरमा केही निःशुल्क अनुप्रयोगहरू, खाल वा खेलहरूको नमूना छनौट गर्नुहुन्छ भने यी सुझावहरूले गर्नुपर्दछ:
यो अनुप्रयोग डाउनलोड र स्थापना गरी दिएका समीक्षा र स्टार रेटिंग जाँच गर्न चोट छैन। विकासकर्ताले कुनै ज्ञात कमजोरीहरूलाई डिबग गर्न ट्वीकहरू पनि जारी गर्न सक्दछ। Apps स्टार भन्दा माथि मूल्या stars्कन गरिएको अनुप्रयोगहरूको लागि सँधै जानुहोस्। राम्रो रेटिंग, राम्रो अनुप्रयोग।
एन्ड्रोइड प्रमाणिकरण सुविधा खोल्नुहोस्। यो सुविधा एन्ड्रोइड उपकरणहरूमा उपलब्ध छ। यसले निरन्तर अनुगमन गर्दछ कि तपाइँको उपकरण कसरी चल्दैछ र कुनै संदिग्ध गतिविधिको बारेमा चेतावनी दिन्छ।
एक मोबाइल फोन एन्टीवायरस स्थापना विचार गर्नुहोस्। त्यहाँ एक दर्जन प्रमाणित अनुप्रयोगहरू छन् जुन विश्वसनीय, विश्वसनीय र सुरक्षितको रूपमा हटाइएको छ। यदि सबैभन्दा खराब हुन्छ भने, सहयोगको लागि टेक्निकल टीमलाई रिपोर्ट गर्नुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको आईओएस वा एन्ड्रोइड उपकरण स्वचालित रूपमा पछिल्लो अपडेट (सुरक्षा अपडेट) प्राप्त गर्न सेट गरिएको छ।
गुगल प्ले समर्थनमा सबै संदिग्ध अनुप्रयोगहरू, खाल, खेलहरू रिपोर्ट गर्नुहोस्। तपाईं उनीहरूको आधिकारिक लि via्क मार्फत वा सही खेल स्टोर होमपेजमा पुग्न सक्नुहुनेछ।
कुनै साइबर सुरक्षा खतराले तपाईलाई दिमागको शान्ति अस्वीकार गर्न नदिनुहोस्। कोहीले तपाइँको व्यक्तिगत, वित्तीय र क्रेडिट कार्ड डेटा पहिचान चोरीको लागि र तपाइँको कडा कमाएको पैसाको फ्लीचिंगका लागि चोर्न सोचिरहेको हुन सक्छ। तिनीहरूलाई नदिनुहोस्। माथिको सल्लाह पालन गरेर सुरक्षित रहनुहोस्। खराब सफ्टवेयरबाट मुक्त अनुप्रयोग संसारको आनन्द लिनुहोस्।